NA-FS14G4 Washing Machine - Panasonic
အထူး အသုံးပြုရလွယ်ကူသော စနစ်ဖြင့် စူပါအစွမ်းဖြင့် လျှော်ဖွပ်ပေးနိုင်သည်
အမြှုပ်များများ ထစေခြင်းဖြင့် အစွန်းအထင်းများကို ကင်းစင်သွားစေသည်
ActiveFoam System သည် အဝတ် မလျှော်မီကပင် သိပ်သည်းဆမြင့်မားသည့် အမြှုပ်များစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အမြှုပ်များစွာ ထသည့်အတွက် ချည်သားထဲတွင် စိမ့်ဝင်နေသည့် အညစ်အကြေးများကို သီးခြားစီ ဖယ်ထုတ်ပေးသည်။
* အမြှုပ်ထသော အဆင့်သည် အဝတ်ပမာဏ၊ ချေးချွတ်ပေးနိုင်သည့် အတိုင်းအတာ၊ ဆပ်ပြာအမျိုးအစားနှင့် ရေဖိအား အစရှိသည့် အခြေအနေများအပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ အဝတ်လျှော်ဖွပ်ပေးသည့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြောင်းလဲမှု မရှိစေပါ။
ActiveFoam System ၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
1. သန့်ရှင်းတောက်ပြောင်သော အဝတ်များ ရရှိစေမှု
အစွမ်းထက်ထက်ဖြင့် လျှော်ဖွပ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် မျက်နှာပြင်တင်းအားကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးရန် အမြှုပ်များစွာကို ဖန်တီးပေးသည်။
2. လျင်မြန်စွာ ထိုးဖောက်နိုင်မှု
သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော အမြှုပ်များက အညစ်အကြေးများကို အမြန်ဖယ်ရှားပေးနိုင်ရန် အဝတ်အစားများထဲသို့ အလွယ်တကူ ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်သွားသည်။
3. ဆပ်ပြာမှုန့်ကို မြန်မြန် အရည်ပျော်စေခြင်း
မလျှော်ဖွပ်မီမှာပင် ဆပ်ပြာအမှုန့်ကို အမြှုပ်များ ဖြစ်အောင် ပြောင်းပေးလိုက်သည့်အတွက် မပျော်ဝင်လွယ်သည့် ဆပ်ပြာမှုန့်သည် အဝတ်များတွင် စွဲကပ်သွားသည်။
ActiveFoam စနစ် အလုပ်လုပ်ပုံ
Active Wave Pulsator ၏ အောက်ဘက်အပိုင်းရှိ ဒလက်များ လည်သည့်အခါ ဖြူဝင်းမွတ်ညက်သည့် အမြှုပ်ပျစ်ပျစ်များ ထွက်လာသည်။
အမြှုပ်များသည် အဝတ်များထဲသို့ ဖြာဆင်းသွားပြီး လျင်မြန်စွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားသည်။
အမြှုပ်များကို အဝိုင်းပုံ ရေပန်6းခုဖြင့် ထပ်ခါထပ်ခါ လှည့်ပတ်၍ အသစ်ပြန်ဖြစ်စေပြီးနောက် ၎င်းသည် အဝတ်များထဲသို့ နက်ရှိုင်းစွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားသည်။
* အမြှုပ်ထသည့် ပမာဏသည် အဝတ်ပမာဏ၊ စွန်းထင်းမှုအနေအထား၊ ဆပ်ပြာမှုန့်အမျိုးအစားနှင့် ရေ၏စေးပြစ်မှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။ သို့သော် အဝတ်လျှော်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို စိတ်ကြိုက်အနေအထားရရှိအောင် ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။
*မှတ်ချက်- စက်ရုံတွင်း စမ်းသပ်ချက်အပေါ်သာ အခြေခံထားပါသည်။ လျှော်ဖွပ်မှုရလဒ်များသည် အခြေအနေများအလိုက် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
အစွမ်းထက်ထက်ဖြင့် ပွတ်တိုက် လျှော်ဖွပ်ပေးဖို့အတွက် Active Wave Pulsator
ဒလက် 8 ခုပါသော Active Wave Pulsator က ကန်ထဲတွင် အဝတ်များကို ရေစီးအားပြင်းပြင်းဖြင့် အထက်အောက် ရွေ့လျားစေနိုင်သည့်အတွက် ချွတ်ရခက်ခဲသော အစွန်းအထင်းများကို ဖယ်ရှားပေးသည့် ပွတ်တိုက်လျှော်ဖွပ်ပေးသည့် အစွမ်းကို ရရှိစေပါသည်။
ပိုမိုလွယ်ကူစွာ နေ့စဉ် လျှော်ဖွပ်နိုင်မှု
အဝတ်လျှော်ကန်၏ အမြင့်သည် ပို၍ နိမ့်ပြီး ကန်၏ အဝသည် ပို၍ ကျယ်သည့်အတွက် အဝတ်ထူထူများကို အလွယ်တကူ အသွင်း/အထုတ် လုပ်နိုင်သည်။ နေ့စဉ် လျှော်ဖွပ်ရာ၌ ပို၍ သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် အဝတ်လျှော်ကန်၏ အောက်ခြေအထိပင် အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ အနောက်ဘက်တွင်ရှိသော control panel ကိုလည်း အလွယ်တကူ ဖတ်ရှု အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
*ပြသထားသော ဓာတ်ပုံအားလုံးသည် NA-FS16G4 မော်ဒယ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့်မြင့် နည်းပညာကို သုံးပြီး စွမ်းအင်နှင့် ရေကို ချွေတာပေးနိုင်စွမ်း
ECONAVI က ရေအပူချိန်၊ အဝတ်ပမာဏ၊ အဝတ်လျှော်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းကို ရှာဖွေထောက်လှမ်းပြီးနောက် အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်ဖယ်ရှားပြီး စွမ်းအင်၊ ရေနှင့် အချိန်ကို ချွေတာရန် အလိုအလျောက် ညှိယူဆောင်ရွက်သည်။
သင့်အဝတ်အစားများ၏ အခြေအနေကို သိအောင်လုပ်ပြီး စွမ်းအင်နှင့် အချိန်ကုန် သက်သာအောင် ပြုလုပ်ပေးသည်
1. အဝတ်အထည်ပမာဏ အာရုံခံစနစ်
အဝတ်ပမာဏ နည်းသည့်အခါ ရေကို ချွေတာရန် ရေပမာဏကို လျှော့ချလိုက်သည်။ အလေအလွင့်မဖြစ်စေရန် လျှော်ဖွပ်သည့်အခါတိုင်းတွင် အသင့်လျော်ဆုံး ရေပမာဏကို ရွေးချယ်ပေးသည်။
2. ရေအပူချိန် အာရုံခံစနစ်
ECONAVI သည် ဆပ်ပြာမှုန့် အလွယ်တကူ ပျော်ဝင်နိုင်မည့် အပူချိန်ကို သိအောင်လုပ်ပြီး အသင့်လျော်ဆုံး အဝတ်လျှော်ဖွပ်ရန် ကြာချိန်ကို ရွေးချယ်ပေးသည်။
အင်ဗာတာသည် တွက်ခြေကိုက်ပြီး တိတ်ဆိတ်စွာ လျှော်ဖွပ်ပေးနိုင်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် အဝန်လျှော်ကန် လည်ပတ်မှုကို ညင်သာစွာ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါသည်။
Lower tub height and wide tub for easy to reach
Capacity 14kg/ ECONAVI
Fully automatic top-loading washing machine with ECONAVI